प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ०९, २०७८ समय: १५:२९:०२
गायक श्रीकृष्णबम मल्ल र गायिका लक्ष्मी मल्ल करिश्माका अंकल आन्टी हुन्। अंकल आन्टीका कारण पनि घरमा रमाइलो वातावरण हुन्थ्यो। घरमा भएको पूजाआजामा भजन कीर्तन गाउँदा होस् या पारिवारिक भेटघाटको बेला होस् उनी छमछमी नाच्न थालिहाल्थिन्। पढाइमा अब्बल करिश्माको सीए पढ्ने सपना थियो। आमाबुवाले पनि पढाइमै फोकस हुन हौसला दिन्थे तर एसएलसीपछि उनी तीन महिना फुर्सदमा थिइन्। त्यही बेला सानीमाले तीज गीत निकाल्न लागेकी थिइन्।
औपचारिक रूपमा नृत्य र अभिनय भने सिकेकी छैनन् उनले। उनलाई अन्य डान्सको स्टेपभन्दा टिपिकल डान्समा आफूले राम्रो गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। कुनै नयाँ स्टेप आफूलाई मन पर्‍यो भने तत्कालै सिकिहाल्ने बानी छ उनको। पछिल्ला अधिकांश लोकगीतको भिडियोमा उनकै अभिनय देख्न सकिन्छ। भन्छिन्, ‘सीए बन्ने सपना लिएकी म म्युजिक भिडियोमै रमाइरहेकी छु। पाँच सयभन्दा बढी गीतमा नाचिसकेकी छु। यो यात्रा रमाइलोसँग बित्यो। घर छाडेर बाहिरी जिल्ला जाँदा होस् या विदेश कार्यक्रममा जाँदा होस् करिश्मा भन्ने परिचय बनेको छ। यही नै मेरो सन्तुष्टि हो।’
उनको काममा परिवारको पनि साथ छ। विशेषत उनकी आमा उनलाई हौसला दिइरहन्छिन्। उनले अभिनय गरेको गीत दुई चार दिन टीभीमा बजेन भने सोधिरहन्छि, ‘के भयो ? टीभीमा किन आएन ? ’ दुई दाजुकी एकल बहिनी हुन् उनी। परिवारकी कान्छी छोरी। सुटिङबाट फर्कंदा कहिले राति हुन्छ, बाहिरी जिल्ला जाँदा घर आउने समय मिल्दैन तर पनि उनी ढुक्क छिन्। भन्छिन्, ‘मेरो कामप्रति सकारात्मक सोच्नुहुन्छ। सबैले बुझ्नु भएको छ। आफन्त र छिमेकीले सबाल पनि गर्ने गर्छन् रे कहिलेकाहीँ तर मामुले नै मेरो पक्षमा कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले सबैले मलाई माया गर्छन्।’
सुरुआतमै सानीमाको गीतमा अभिनय गरेको भएर होला उनलाई यो क्षेत्रमा खासै संघर्ष गर्नु परेन। दुव्र्यवहार पनि भोग्नु परेको छैन। तर पनि कहिलेकाहीँ निर्माता निर्देशकले मिसयुज गर्न खोज्छन्। उनले सार्वजनिक रूपमै प्रतिकार गर्ने गरेकी छन्। गलत व्यवहारबाट बच्न आफू नै सजग हुनुपर्ने उनको तर्क छ। काम दिने बहानामा होस् या सम्बन्ध बढाउने बहानामा होस् कुनै पनि गलत सर्त मान्न नहुने उनको अनुभव छ। आफ्नो काममा परिपक्व भए कसैसँग सम्झौता गर्नु नपर्ने उनको अनुभव छ।
अहिले सिंगल बताउने करिश्मा स्विट् सिक्स्टिनमा पहिलो पटक प्रेममा परेकी थिइन्। आफूभन्दा पाको व्यक्तिससँग सम्बन्ध गाँसेकी करिश्माको त्यो प्रेम भने लामो समय टिकेन। किन त ? भन्छिन्, ‘म अलि जिद्दी स्वभावकी छु, मलाई कसैले अन्डरमा राखेको सहन सक्दिनँ। काममा व्यस्त भइरहेको हुन्छु। प्रेमीलाई समय दिने, डेट जाने, फोन गर्ने, ख्याल गर्ने समय नै हँुदैन यसैले पनि सायद सम्बन्ध अगाडि गएन। पछुतो पनि छैन मलाई। खासमा पे्रमीले सहयोग गर्छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। परिवार नै मेरो खुसीको कारण अनि काम नै मेरो प्रेमी। जोसँग म हरदिन जोडिइरहेकी हुन्छु।’